TS magaabay: Sida loo jar TS Files
> Resource > Video > Sida loo jar / Split / goo TS Files
File TS kordhin waxaa si balaadhan looga isticmaalaa in content HD. Videos la format waxa ay kala yihiin sida caadiga ah ballaaran ee size. Sidaas waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay si ay u dhinto weyn-size TS video qaybo badan oo yar yar video files, ama gooyay qaar ka mid ah video clips ka mid ah oo aan loo baahnayn file TS ah. Hubi tutorial video ku saabsan sida loo gooyay / kala videos hore oo kale.
Dhab ahaantii, waxaad si fudud oo dhaqso ku dhameysan kartaa shaqo inta aad leedahay la magaabay fiican TS. Halkan, Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) ( Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) ) si weyn lagu talinayaa. Way fududahay in la isticmaalo iyo badan oo muuqaalada video tafatirka ay ka mid yihiin jarida files TS, ugu muhiimsan, weli sii qaraabo sare oo tayo leh audio video & ka dib markii tafatirka la sameeyo.
Easy in la isticmaalo TS magaabay: Filmora Wondershare (asal ahaan Wondershare Video Editor)
Si fudud jaray file TS galay qaybaha kala duwan leh tayo waayi maayo.
Ku dar kala guurka, filtarrada, Intro / credits iyo dhawaaqu saamaynta si ay u sameeyaan TS soo gudbin dheeraad ah oo ku cad.
Save file TS ah qaabab kala duwan, gubi in DVD ama si toos ah online geliyaan.
1. files Import TS in this TS magaabay
On menu ugu weyn ee interface ka, waxaa jira ah "Import" button. Just waxa guji si ay dajiyaan aad file TS doonayo kombiyuutar si ay app this. Wakhtigan, aad dareento doonaa TS video daray ayaa ku qoran album User ee this video TS magaabay. Waxa kale oo aad si toos ah u soo jiidi kartaa oo hoos u Album ah. Ka dibna ku rid video TS aad rabto in aad kala album in ay Timeline ah.
2. Iska yaree files TS
Dhaqaaq cas Time Tusiyaha in booska aad rabto ka dibna riix badhanka maqas ah. Isla markiiba, file TS waxaa loo kala qeybin doonaa laba qaybood. Sidaas, waxaad yareyn karo files TS dhowr clips. Muddadaan, inaad si fiican u badbaadin lahaa mashruucan adigoo riixaya badhanka on dhinaca kore ee bidix iyo in la tago "Save sida" ujeedada archive.
Marka aad file TS u googooyeen clips, kaliya tirtirto, kuwaas oo clips aadan rabin. Markaas si toos ah u dhoofiyaan clips nasashadayda gelin file cusub.
3. Dhoofinta file cusub TS
Si aad u dhoofiyaan file cusub, kaliya riix "Abuur" button. Daaqadda pop up wax soo saarka, waxaad u tagi kartaa "Qaabka" tab si uu u badbaadiyo video galay qaabab kala duwan. Fursadaha kale ee wax soo saarka ka mid ah gubi in DVD, geliyaan on YouTube iyo Facebook ama badbaadin qalabka mobile qaabab socon.
Video Tutorial: Sida loo jar / Split / goo TS Videos
Sida loo soo biir TS Videos
Sida loo dar subtitles in Video
Sida loo Resize Video Files
Sida loo dar Audio in Video